Home » Akụkọ njem » Akpụkpọ ụkwụ Sandals na ASTA na-ekpughe usoro njem dị mkpa tupu oge ọkọchị
Sandals Resorts na ASTA na-ekpughe isi njem njem
Na emume nke Travelbọchị Onye Ndụmọdụ Njem Nleta Mba, Sandals® Resorts sonyere na nyocha nyocha ya na American Society of Travel Advisors (ASTA) iji nyochaa omume na omume ndị njem tupu atụ anya ọsọ ọsọ na njem oge ọkọchị.
A na-enye nghọta dị mkpa maka ojiji ndị ndụmọdụ na-eme njem na ịgagharị ebe, ọnọdụ, na mmasị njem.
Nnyocha ahụ gosipụtara mkpa ndụmọdụ a tụkwasịrị obi na-aga n'ihu na ụdị ndị a tụkwasịrị obi.
Ihe omuma a na-elekwasị anya na mgbanwe na-agbanwe agbanwe maka njem na anya iji nyere ndị ndụmọdụ aka ịghọta mkpa ọrụ ha dị ka ndị na-akwado ndị ahịa.
Ọmụmụ ihe ahụ, ihe omumu nyocha mbụ nke njikọta n'etiti Sandals Resorts na ASTA, na-enye nghọta dị omimi banyere ojiji onye ndụmọdụ njem na-enyocha ma na-enyocha ebe, ọnọdụ, na mmasị njem.
“Ndị njem na-anụ ọkụ n’obi imejupụta oge funahụrụ ha ma laghachite n’ọ theụ nke na-arọ nrọ ma mesịa jiri ezumike ha. Nke a research pụta ìhè mkpa nke ndụmọdụ tụkwasịrị obi na-aga aka na aka na ntụkwasị obi ụdị dị ka akụkụ nke njem ha na-eme atụmatụ atụmatụ, ”kwuru Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Onye isi oche ndị isi ahịa ahịa Global & Mmekọrịta Mmekọ Gary Sadler. “Ahụmịhe dị mkpa. Anyị emeela ememme ndị a nke ogologo oge nke nduzi ha na-eme ka njem na ime njem ka mma, karịchaa taa. ”
“Ekele dịrị ndị anyị na ha mekọtara Sandals Resorts, n’afọ a anyị nwere ozi ọma anyị ga-eji mee mmemme Travelbọchị Ndụmọdụ Na-enye Ndụ Mba, ”Zane Kerby, Onye isi ala & onye isi oche nke ASTA kwuru. “Nke a nnyocha na-elekwasị anya na-agbanwe agbanwe odida obodo maka njem na anya kwupụta na-enyere ndị ndụmọdụ ịghọta mkpa ọrụ ha dị ka ndị na-akwado ndị ahịa ha. Ozi ọma maka ndị ndụmọdụ njem bụ na anyị na-ahụ mmụba siri ike na agụụ zuru oke maka njem yana nke a - ndị njem na-echigharịkwuru ndị ọkachamara maka ndụmọdụ.